Zvemagariro Swipe: Ruzivo rweMushandisi Ruzivo rweMipiro Yekupa | Martech Zone
China, May 22, 2014 Chipiri, Kurume 22, 2016 Douglas Karr
Nguva zhinji mukushambadzira, iwo muitiro wakanaka kuenda kuburikidza neshanduko maitiro, uchitsvaga yega nhanho imwe chete nemaitiro, uye nekunzwisisa kuti ndeapi mhinduro anogona kuitiswa kuti ukurire. Kune masangano anobatsira, ndiko kudimbura pakati pesevhisi irikuita basa uye nguva nenzvimbo yemupiro.
Iyi mhinduro kubva kuMisereor, iyo Yemagariro Slide, mhinduro ine hungwaru yekugadzirisa nyaya mbiri dzakasiyana:
Vanhu havasisiri kutakura mari futi.
Bhokisi remupiro haripe ruzivo rwezvakakwaniswa nemari.
Pinda Yemagariro Swipe. Vhidhiyo inopindirana nekiredhiti kadhi swipe yemunhu ari kupa mari. Sezvavanotsvaira nekupa chikafu, chidimbu chechingwa chinotemwa. Kana sezvavanotsvaira uye vachipa kurwisa kubiridzirwa kwevanhu, zvisungo zvakabata maoko emumwe munhu zvinodamburwa. Chokwadi mhinduro inoshamisa.
Tags: zvipo zvekupamutsahunhu hwekupaZvipomisereorswipe yemagariro